पाँचथर महासंघको साधारणसभाबाट ४ जना पत्रकार पुरस्कृत - Limbuwan khabar
पाँचथर महासंघको साधारणसभाबाट ४ जना पत्रकार पुरस्कृत
शनिबार, ०३ माघ, २०७७ बिहानको ११:५६ बजे, लिम्बुवान न्युज
फिदिम। इगल एफ एम पाँचथरका स्टेसन म्यानेजर उपेन्द्र येक्तेनसहित पाँचथरका ४ जना पत्रकार पुरस्कृत भएका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघ पाँचथर शाखाको शुक्रवार बार्षिक साधारणसभा कार्यक्रमबाट पुरस्कृत भएका छन् । काम चलाउ सरकारका भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बसन्तकुमार नेम्बाङको प्रमुख आतिथ्यतामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो ।
महासंघले शाखा सचिव तुलसी क्षितिजले पेस गरेको सांगठनिक र कोषाध्यक्ष भीमकुमार बाँस्कोटाले पेश गरेको आर्थिक प्रतिवेदन पारित गरेको छ । साथै यस साधारण सभाबाट आपतकालीन राहत कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि पारित गर्दै १० लाख रुपैंयाँको अक्षयकोष रहने गरी तत्काल ५० हजारबाट आपतकालीन राहत कोष संचालनमा ल्याउने जनाएको छ । अध्यक्ष लवदेव ढुंगानाले १० हजार रुपैंयाँ उक्त कोषलाई प्रदान गर्नुभएको छ ।
कार्यक्रममा विशेष अतिथी फिदिम नगरपालिकाका मेयर ओनाहाङ नेम्बाङ, प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुण्य प्रसाद ढकाल, पत्रकार महासंघका केन्द्रिय सदस्य द्धय सटेन्द्र जवेगु र गोपाल बराइलि, महासंघ १ नम्बर प्रदेशका उपाध्यक्ष सोननाथ सुशेलि, प्रदेश सदस्य सन्तोष रुचाल, गणेश सम्पाङ, विपेन्द्र गौतम त्यसैगरी महासंघ ताप्लेजुङका कार्यबाहक अध्यक्ष चन्द्र प्रयास लिम्वू, महासंघ पाँचथरका पूर्व अध्यक्ष प्रेम ओझाले पनि लगायतले शुभकामना मन्तव्य व्यक्त राख्नुभएको थियोे । साधारण सभा पत्रकार महासंघ पाँचथरका अध्यक्ष लवदेब ढुङगानाको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो ।
इगल एफ.एम.का स्टेसन म्यानेजर येक्तेन स्व. हरिचरण भद्रमाया वातावरण पुरस्कार २०७७ बाट पुरस्कृत भएका हुन भने स्व. हरिचरण भद्रमाया वातावरण पुरस्कार २०७६ पाँचथरका सञ्चारकर्मी शान्ति राईलाई प्रदान गरिएको छ । यसैगरि स्व.प्रजापति जालपादेवी खेलकुद पत्रकारिता पुरस्कार २०७६ बाट पत्रकार जंगबहादुर तामाङ र स्व. प्रजापति जालपादेवी खेलकुद पत्रकारिता पुरस्कार २०७७ बाट पत्रकार दिपक बोहोरा पुरस्कृत हुनुभएको छ । स्व. प्रजापति–जालपादेवी खेलकुद पत्रकार पुरस्कारको राशि १० हजार रहेको छ भने स्व. चरिचरण–भद्रमाया वातावरण पुरस्कारको राशि ५ हजार ५५५ रहेको छ । पुरस्कृत येक्तेन इगल एफ एमसँगै उज्यालो नाइन्टि नेटवर्क र प्राइम टेलिभिजनमा पनि आबद्ध रहनुभएको छ । उनी संघीय पत्रकार युनियनको जिल्ला अध्यक्ष समेत हुन् ।
पुरस्कृत ४ जनालाई भौतिक पुर्वधार तथा यातायात मन्त्री बशन्तकुमार नेम्बाङले नगदसहित सम्मान पत्रद्धारा पुरस्कार प्रदान गर्नुभएको थियो । स्व.हरिचरण–भद्रमाया वातावरण पुरस्कार फिदिमका व्यावसायि नरेन्द्र अधिकारीले गरेका हुन् भने स्व. प्रजापति–जालपादेवी खेलकुद पत्रकार पुरस्कार फिदिमका व्यावसायि हरिप्रसाद नेपालले स्थापना गर्नुभएको हो ।
चुम्लुङको कनकाई अध्यक्षमा प्रेमकुमार फोम्बो
झापा। किरात लिम्बु जातिहरु साझा संस्था किरात याक्थुङ् चुम्लुङ् कनकाई नगर अध्यक्षमा प्रेम कुमार फोम्बो निर्वाचित भएका छन् । शनिबार कनकाई दुर्गापुरको सामुदायिक भवनको सभाहलमा सम्पन्न तेस्रो अधिवेशनले नयाँ कार्य समिति चयन गरेको हो ।...
राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा संघीय संसद बैठक आह्वान
काठमाडौं, १७ फागुन । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद अधिवेशन आह्वान गरेकी छन् । सरकारको सिफारिसअनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले फागुन २३ गते अपरान्ह ४ बजेका लागि संसद अधिवेशन आह्वान गरेकी हुन् । राष्ट्रपतिको कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा २३...
मौसम विद्वका अनुसार आजबाट गर्मी शुरु
लिम्बुवानखबर, १७ फागुन। जाडोयामको समाप्तीसँगै आजदेखि प्रि–मनसुन शुरु भएको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले आज एक बुलेटिन निकालेर मार्च १ अर्थात् आजदेखि यस वर्षको जाडोयाम अन्त्य भई प्रि–मनसुन ‘सिजन’ शुरु भएको जनाएको छ...